Gịnị kpatara Epublibre anaghị arụ ọrụ? Lelee ihe ndị a | Akụkọ akụrụngwa
Gịnị kpatara Epublibre anaghị arụ ọrụ? Lelee ihe ndị a
Ọ bụrụ na ị bụ onye na - agụ akwụkwọ, enwere ọtụtụ ohere ị ga - eji rụọ ọrụ weebụsaịtị Epublibre, ebe o doro anya na ọ bụ peeji kacha mma maka akwụkwọ n'efu na ntanetị. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịchọta ibe a ma ọ bụ na-enweghị ọrụ, n'ihi nke a na n'ihi na anyị hụkwara ịgụ akwụkwọ n'anya, anyị ga-atụle isiokwu a na nkwanye nke ndị ọzọ na - arụ ọrụ ugbu a Epublibre agbadata.
N’oge nile web dara ada, ọ laghachighaala ọrụ n’ime ụbọchị ole na ole, mana nsogbu a bụ na ọ na-egbochi ọgụgụ anyị ma ọ bụ na-emebi nri ehihie anyị chere na anyị ga-eji ya gụọ akwụkwọ anyị na ọrụ. Ugbu a ọ dị ka anyị enwere nsogbu kpụ ọkụ n'ọnụ, anyị ga-enyocha ihe ndị ọzọ mara mma iji dochie ya, ụfọdụ n'ime ha dị oke mma na ikekwe maka ụfọdụ ọ bụ ọbụna nhọrọ ka mma ọbụlagodi na Epublibre na-arụ ọrụ nke ọma.
1 Mana ... Gini bu Epublibre ka obu?
1.1 Etu esi enweta katalọgụ Epublibre?
2 Epublibre agbadatala ogologo oge. Ọ ga-arụ ọrụ ọzọ?
3 Enwere ike ịnweta Epublibre ọbụlagodi mgbe ọ dara? Enwere usoro ma enwere ike.
4 Ndị ọzọ ka Epublibre
4.1 Akwụkwọ Amazon
4.3 Ka anyị gụọ
4.5 Akwụkwọ Google
5 Nkwado Editor
Mana ... Gini bu Epublibre ka obu?
Maka ụfọdụ ndị na - agụ akwụkwọ oge ụfọdụ ma ọ bụ maka ndị na - agụ akwụkwọ siri ike bụ ndị gụrụ ndụ ha niile na akwụkwọ, anyị ga - akọwa ihe Epublibre bụ. Peeji a dị na ụgbụ kemgbe 2013 ma jisie ike kpokọta nnukwu ụlọ akwụkwọ nke akwụkwọ. Ọ bụrụ na anyị nyochaa data a kapịrị ọnụ site na nwelite ikpeazụ ya tupu ọdịda ikpeazụ ya, anyị nwere ike ịhụ na a kọọrọ ọbá akwụkwọ nke ihe na-erughị akwụkwọ 41.756 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ 120 ọzọ na nkwadebe.. Ọbá akwụkwọ ahụ dabere na aha ndị Spen, mana anyị nwekwara ike ịchọta ọtụtụ akwụkwọ n'asụsụ gọọmentị ndị ọzọ nke peninshula dị ka Valencian, Galician, Euskera ma ọ bụ Catalan.
Etu esi enweta katalọgụ Epublibre?
Iji debanye aha na weebụsaịtị a ọ dị mkpa ka a nabata akaụntụ anyị, mana ọ bụghị ndebanye aha mgbe niile, anyị ga-enweta ndepụta ndọtị ogologo nke anyị nwere ike ịnọ ogologo oge tupu ịnabata anyị.
Otu n'ime ndị kasị nwee ihe ịga nke ọma nke web bụ eziokwu na o nwere akwụkwọ nhazi akwụkwọ, n'ụzọ zuru ezu inweta site na ya mkpuchi. Iji bipụta ma dezie akwụkwọ anyị ga-abụ ndị so na weebụ. Mana iji budata akwụkwọ enwere nnwere onwe zuru oke, ka onye ọ bụla nwee ike ịnweta ma budata akwụkwọ dịka o masịrị ha.
Akwụkwọ Epublibre niile dị na ePub, agbanyeghị na anyị nwere ike ịchọta ụfọdụ n'ime ha n'ụdị ndị ọzọ. Usoro ePub bụ ụdị nke ndị na-agụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị na-agụ akwụkwọ na-ejiỌ bụ ezie na enwere ike ile ụdị ụdị a na ụfọdụ ekwentị ma ọ bụ kọmputa, ọ bụghị ihe amamihe dị na ya n'ihi ọkụ na-acha anụnụ anụnụ nke ogwe ya, ike na-agwụ ha n'anya nke ukwuu. Maka nbudata anyị ga-ahụ na anyị etinyela mmemme maka nbudata iyi.
Epublibre agbadatala ogologo oge. Ọ ga-arụ ọrụ ọzọ?
Nke bụ eziokwu bụ na Epublibre taa enweghị ike ịnweta ma ọ bụrụ na anyị abanye na ihe nchọgharị anyị site na itinye adreesị weebụ, ọ bụghị oge mbụ ọnọdụ yiri nke a gafere n'oge, Epublibre ata ahụhụla ọtụtụ ogeMana o teela aka ọ hụtara nnukwu ọdịda ahụ n’oge.
You nwere ike ịlaghachi? nwere ike ịlaghachi azụ, ma obu na ngalaba gi ma obu nke ozo. Ọ bụ ezie na ihe niile na-egosi na ọ nwere ike ịga n'ihu na-egbu oge ka anyị wee chọta onwe anyị tupu ntanetị arụmọrụ 100%. Ihe bụ nsogbu bụ na ihe ọmụma na-abụghị eziokwu na-achị, n'ihi na Epublibre enweghị ụdị aka ọrụ ọ bụla na netwọkụ mmekọrịta, yabụ anyị enweghị ike ịnweta ụdị nkwukọrịta ọ bụla site n'aka ndị mmepe ya.
Kemgbe ọdịda ya, ụfọdụ akụkọ Twitter apụtawo mana ọ bụ ezie na ha dị ka ndị ọchịchị, ha abụghị. Naanị akaụntụ "gọọmentị" nke anyị siri nweta ozi ọ bụla bụ nke onye na-ahụ maka ijigide ọrụ nnabata Epublibre, na akaụntụ ya ọ na-ebipụta akụkọ gbasara ya.
Ihe ndekọ a kapịrị ọnụ bụ @TitivillusEPL nke dị ka ozi ọhụụ si kwuo na ọ fọdụrụ ntakịrị ka Epublibre rụ ọrụ ọzọAna m ekwu nke a ọ kwụsịtụrụ ugbu a, yabụ na anyị enweghị ike ịlele profaịlụ Twitter gị ma ọ bụ mbipụta gị. Anyị amaghị ihe kpatara ya, mana ndị na-eme mgbanwe Twitter egbochila akaụntụ ahụ.
Enwere ike ịnweta Epublibre ọbụlagodi mgbe ọ dara? Enwere usoro ma enwere ike.
Usoro iji nweta Epublibre na ọnọdụ ya ugbu a. Ọrụ a kpọrọ Archive.org nke bụ ọrụ maka ichekwa ibe weebụ ka ha ghara ida ọdịnaya ha dị na ọnọdụ dị ka nke a. Yabụ ị nwere ike ịga na weebụsaịtị ndị anaghị adị ma dịka ikpe a ha nwere ike ha agaghị adị ọzọ.
Site na adreesị gị na archive.org anyị nwere ike ịnweta weebụ ọ bụla. Mana enwere oke ike, Anyị agaghị enwe ike ịbanye ma ọ bụ nweta ọtụtụ ọdịnaya ndị edebeghị na Archive.org. Otu n'ime ha bụ nbudata peeji a kachasị ọhụrụ, ebe ọ bụ na Archive.org na-eme nkwado ndabere site n'oge ruo n'oge. O zughi oke mana ma ọ dịkarịa ala, anyị ga-enwe ohere.
Ndị ọzọ ka Epublibre
Anyị ga-enyocha ihe ndị ọzọ kachasị mma maka Epublibre maka ịgụ akwụkwọ n'ụdị dị iche iche, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu bụ n'efu, mana ụfọdụ nwere ike ịnwe ụdị ndebanye aha mbụ.
Motherlọ ahịa nne nke ụlọ ahịa niile, ugbua ụlọ ahịa dị n'ịntanetị kachasị ama oge niile, yana otu n'ime ọrụ kacha mma a na-ere ahịa nwere (ọ kachasị m mma), o nwekwara uru dị na ya inwe nnukwu ọbá akwụkwọ akwụkwọ ma ọ bụrụ i bu onye isi. Omuma akwukwo na asusu anyi, dika oru nke Cervantes, Lorca ma obu Miguel Hernandez ... wdg. Ichefughi oru ndi ozo nke asughariri n'asusu Spanish, nwere ike ibudata ha n'asusu mbu ha.
Amazon na mgbakwunye na onyinye a niile nke akwụkwọ gụnyere na ndenye aha gị, na-enyekwa ọtụtụ akwụkwọ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnọghị, mana maka ọnụahịa nke € 36 kwa afọ Echere m na ọ bụ nhọrọ dị oke mma, ebe ọ bụ na mgbakwunye na ọrụ akwụkwọ a, anyị nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ, gụnyere ndị dị na ụlọ ahịa ma ọ bụ vidiyo kacha mma. Anyị ga-enwe ezigbo ego ịzụrụ Kindle Paperwhite nke anyị duziri nyocha na ActualidadGadget.
Anyị ekwuola okwu banyere weebụsaịtị a na mbụ n'isiokwu a, ebe ọ bụ na site na ya anyị nwere ike ịnweta Epublibre ọbụlagodi mgbe ọ dị ala. Ọzọkwa na weebụsaịtị a anyị nwere ike ịchọta karịa Akwụkwọ 18.000 na Spanish. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye akwụkwọ niile dị ugbu a n'ọtụtụ asụsụ, anyị tinye a ngụkọta nke 1,4 nde akwụkwọ. Anyị nwere ike ibudata ọtụtụ ọdịnaya dị mfe, ma n'ime PDF dị ka ePUB, utu aha ndị ahụ kachasị amasị anyị.
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime isi mmalite ọdịbendị edere edepụtara na anyị nwere ike ịchọta na ịntanetị, otu n'ime ihe ndị a kwadoro ugbu a na Epublibre anaghị arụ ọrụ.
Pịa na nke a Njikọ Accessbanye.
Ka anyị gụọ
Na nke a anyị ga-akwadoro a ụgwọ ọrụ n'okpuru ndebanye aha ọnwa, ọ bụ ezie na anyị nwere enwere ike ịnwale ya tupu ụbọchị 30. Ndebanye aha na-enye anyị ihe karịrị 1000 akwụkwọ edepụtara, yana ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ọdịyo, ihe dị mkpa maka ndị nwere ahụike anya siri ike ma ọ bụ na-achọ ị likea ntị mgbe ha na-ezu ike ma ọ bụ zuru ike n'ihe ndina ya.
A na-ejikọta aha ndị dị n'etiti ndị na-ere ere kachasị mma, akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ. Anyị nwere ngwa maka iOS na gam akporo, ya mere ọ ga-adị nnọọ mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta site na ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ ndị a. Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ uru a na-akwụ ụgwọ, ebe ọ bụ na, na ụzọ, Netflix nke akwụkwọ.
Na-agụ, na-amụta na-eto eto bụ ha catchphrase. E kewara ya na ngalaba 3, «Na-atụ aro akwụkwọ», «Akwụkwọ na ederede na PDF» y «Akụrụngwa iji melite ọgụgụ gị», isiokwu ndị na-adọrọ mmasị na ịhọrọ akwụkwọ. Nye akwụkwọ na ihe ndị enyere ikikere n'efu Creative Commons (nzukọ na-abaghị uru raara nye iji kwalite nnweta na mgbanwe omenaala).
Greatlọ ọrụ ọzọ dị egwu nke sonyekwara n’edemede edepụtara bụ Google. Na mgbakwunye na ịnye ọrụ a na-apụghị ịgụta ọnụ ma ọ bụ ntanetị ịntanetị nke kachasị mma, ọ nwere nnukwu ọbá akwụkwọ nke akwụkwọ elektrọnik. Anyị ga-achọta otu ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akwụkwọ dị na usoro dijitalụ n'asụsụ ọ bụla, gụnyere Spanish.
Na mgbakwunye na akwụkwọ, anyị nwere ike inweta akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ yabụ na onyinye ha dị iche iche. Ọ bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgụ ihe site n'oge ruo n'oge, mana anaghị m akwado ya dị ka isi iyi ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ịgụ akwụkwọ. Ebe ọ bụ na ọtụtụ n’ime ha nwere ike ịgụ ma ghara ibudata ya.
N'uche m dị umeala n'obi ma ọ bụrụ na ihe omume ntụrụndụ gị bụ ịgụ akwụkwọ, Obi abụọ adịghị ya, nhọrọ kachasị mma bụ inweta akwụkwọ ntanetị sitere na Amazon, ebe ndị a nwere ogwe na teknụzụ anaghị adị oke ike n'anya. na a pụtara ẹdude price, na mgbakwunye Ekwadoro m ịdenye aha na Amazon prime, nke ga-enye anyị ohere ịbanye n'otu ọba akwụkwọ kachasị ukwuu, yana ọtụtụ uru ndị ọzọ na-atọ ụtọ, dịka mbupu n'efu na ụlọ ahịa gị ma ọ bụ ọrụ vidiyo dị adịchaghị nke nwere usoro na ihe nkiri ị nwere.
Ọ bụrụ na ị na-eche na e nwere uzo ozo kacha mma Anyị ga-enwe obi ụtọ ịgụ echiche gị na ngalaba nkọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Gịnị kpatara Epublibre anaghị arụ ọrụ? Lelee ihe ndị a
Daalụ maka onyinye Marianito!
Daalụ Marianito maka izipu njikọ, ibe na-adọrọ mmasị. ekele
Huawei Watch GT2 Pro: Igwe elekere zuru oke ruo taa
Esi gbaa CD na egwu ma ọ bụ vidiyo na kọmputa gị